ခင်လေးငယ် : ~ ညအရောင် ~
~ ညအရောင် ~
ညရဲ့ အရောင်က ပုံစံတူ ထုဆစ်ထားဆဲ....။ အရင်အတိုင်းတွေနဲ့ ထပ်တူကျလျက်...။ အပူရှိန် ပြင်းနေတာရယ်- ခပ်သော့သော့ လေပြေ မရှိတဲ့ အချက်ရယ် အဲ့ဒီ နှစ်ခုစလုံးဟာ နွေညရဲ့ သရုပ်မှန် မဟုတ်လား..။ အတ္တတရားနဲ့ သစ္စာတည်တဲ့ နွေညဟာ သူ့အတ္တနဲ့သူ စူးစူးရှရှ ကျေနပ်နေပုံရတယ်..။
ဒီလိုနဲ့ နွေညဟာ သူမကို တစ်ဆစ်ဆစ် ကိုက်တော့တာပဲ..။ လူကို မြိုမယောင် လှောင်ပြောင်ပြန်ရဲ့.။ ရယ်စရာ ကောင်းတာက တကယ်တမ်း သူမဟာ နွေညရဲ့ ဝမ်းဗိုက်ထဲ ရောက်နေပြီးသားရယ်..။ ဘယ်လောက်များ မုန်းစရာလဲကွယ်..!!
ညာသံပေးပြီး ဘယ်က ဝိုက်တယ်..။ နွယ်တစ်ပင်လို ရစ်ခွေ ပတ်တယ်..။ စွေ့ကနဲ ဆံနွယ်တွေ ကြားထဲ..။ လှစ်ကနဲ ပါးပြင်နှစ်ဖက် အပေါ်..။ ငြင်းဆန်ချိန် မပေးပဲ အိပ်စက်ရာ မွေ့ရာထက်က ခန္ဓာတစ်ကိုယ်လုံးကို ကောင်းကင်ယံဆီ် ပွေ့ချီခေါ်ဆောင်ပြန်ရဲ့..။ နွေညဟာ မြူးမြူးကြွကြွ ရှိလှတယ်..။ သူမကတော့ အလွမ်းတွေ တစ်နင့်တစ်ပိုးနဲ့ တိတ်တဆိတ် ညှိုးလျော့လျော့..။
ကြယ်တွေက နီးလာလိုက်- ဝေး ဝေးသွားလိုက်နဲ.။ ပူပူအိုက်အိုက်မှာ တူတူပုန်းတမ်း ကစားနေတဲ့ ကြယ်လေးကွေက ချစ်စရာတော့ အကောင်းသား..။ ပါးလျလျ တိမ်လွှာတွေဟာ လိုအပ်တာထက်ပိုပြီး နွေညနဲ့ လက်ပွန်းတတီး ရှိလွန်းနေသလိုပဲ..။ အဲ့လို ထင်မိချိန် သူမနှုတ်ခမ်း နှစ်လွှာဟာ ဘယ်လို သန္တာန်များ ရှိနေခဲ့ပါလိမ့်..!! သေသေသပ်သပ်နဲ့ ပြုံးရိပ်သမ်းနေ ခဲ့မယ်တော့ မထင်..။
ကြယ်တွေနဲ့ တိမ်လွှာပါးတွေဆီကနေ ရွက်ဝါခြောက်တွေရှိရာကို ရုတ်ကနဲ ထိုးစိုက်ချတယ်..။ သူဟာ အတော့်ကို ပါးပါးနပ်နပ်ရှိသူပါပဲ..။ ရော်ရွက်ဝါတွေထက် သူမ ခန္ဓာကို လွှတ်ချပေးလိုက်တာများ တကယ့်ကို ဖွဖွသက်သက် ညင်ညင်သာသာလေး..။ ခြောက်ကပ်ကပ် အပျော်တစ်စ မသိမသာလေး သူမရင်မှာ ဖြတ်ပြေးသွားခဲ့ ထင်ရဲ့..။
ဟိုဟိုဒီဒီ အတွေးအစမှာပဲ သူဟာ လူးလူးလွန့်လွန့် နဲ့ ပြန်ရောက်လာ ပြန်တယ်..။ ဖြူဖျော့ဖျော့ လေပြေတစ်စကို ယူဆောင် လာခဲ့တယ်..။ လက်ဆောင်... တဲ့..။ မညာတမ်း ဝန်ခံရရင်ဖြင့် ကျေးဇူးတင်စိတ်လေး နည်းနည်းတော့ ဖြစ်မိသွားတယ်..။ ဒီလို လေပြေတွေပေါ့..!! အဲ့ဒီလို လေပြေတွေနဲ့ သူ့လိုပဲပေါ့...!!
အခုလို သွေ့ခြောက်နေတဲ့ နွေညတွေဟာ တစ်ချိန်တုန်းက မေမေ့အိမ်အိုလေးထဲမှာ စိုစိုပြေပြေ ရှိခဲ့ဖူးသတဲ့..။
သယ်ဆောင်လာတဲ့ မိုးရေ စိုရွှဲရွှဲမှာပေါ့။ သူ့အလွမ်းတွေက နင့်နင့်နဲနဲ တဖွဲဖွဲပဲ။ တယုတယနဲ့ သူ ပုခုံးထမ်း သယ်လာခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့- လက်စမသတ်ရသေးတဲ့ နွေည ပန်းချီကားကို သူ ရေးဆွဲခဲ့ဖူးကြောင်း ရောက်သွားရဲ့။ ဆွဲလာခဲ့တာ ဘဝတစ်လျောက်လုံးပဲရယ်။
အခုတော့ အဲ့ပန်းချီကားဟာ ဆေးသားတွေမှိန်ပြီ။ အချိန်တွေ တိုက်စားသွားကြပြီ။ သူ့ အနားသတ်မှာ- ကောင်းကင်ပြင်က ကြယ်ရောင်တွေနဲ့ အရောင်ဖျော့နေခဲ့ပြီ။ ဒီပန်းချီကားမှာ တိမ်သားတွေ မပါဘူး။ အဲ့တော့ သူ့ ဒီပန်းချီကားမှာ မိုးမရွာဘူး။ ဒါကို ဘယ်သူ မှ နားလည်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သွားကြပါလေ။ လက်ဖြစ်တစ်တွက် အတွင်းမှာပဲ ~ အိမ်လွမ်းသူတွေ အသင်္ချေ အသင်္ချာ မျောပါသွားကြပါလေ။ သူသာ တစ်ယောက်တည်း။ ကျောက်အငူရဲ့ အစွန်းမှာ နေမယ်။ အလွမ်းတွေကို တဖွဖွ ရေတွက်မယ်။
စက္ကူလှေငယ်တွေ ခေါက်မယ်။ လှိုင်းပုတ်သံတွေ တဖြတ်ဖြတ် နားထောင်မယ်။ ကြယ်ရောင်တွေကို တလက်လက် ငေးမောကြည့် နေဦးမယ်။ ဖယောင်းတိုင်ငယ်လေး လောက်တောင် မရှိတဲ့ အလင်းမျိုးနဲ့ ဒီပန်းချီကားကို သူ့ ပျောက်လုလု ဒဏ်ရာတွေနဲ့ အနားသတ်မယ်။
အို ~ အိမ်လွမ်းသူ အပေါင်းတို့။ လှိုင်းလေတွေကြား အသင်တို့ မျောပါသွားကြပါလေ။ ဒီနွေနှောင်းရဲ့ ပန်းချီကား လှပစေနိုင်ဖို့ အသင်တို့ အဝေး ပြေးထွက်သွားကြပါလေ။ နွေပြီးခဲ့ပြီ။ မိုးရောက်လာခဲ့ပြီ။ ဘာများ အဆန်းတကြယ် ရှိနေပါလိမ့်မလဲ။
မိုးစက်တွေ ဖွဖွ စိုနေတဲ့ သူ့ပန်းချီကားကို မျက်ရည်တွေလား ဆေးစက်တွေလား မကွဲပြားတဲ့ အသိနဲ့ အနားသတ်လိုက်တယ်။ တိမ်သားတွေ အလွင့်မှာပေါ့။ သူမရဲ့ အလွမ်းကို လူသူလေးပါး မမြင်အောင် သူ့ရင်ထဲ အသာအယာ လိပ်သိမ်းမိလိုက်တယ်။
မျက်ရည်စတွေ တိတ်ပါစေတော့ ~ ရွက်ဝါတွေလည်း စိမ်းတော့လေ။ တိမ်သားတွေလည်း ရွာတော့လေ။
( ဇေယျ )
★★ အိမ်လွမ်းနေသူကျွန်မ နဲ့ မောင်- အမှတ်တရ အတူ ရေးဖြစ်တဲ့ စာစုလေးတွေပါ..။ ★★
<2013/ 08/ 10>
Posted by Khin Lay Ngel at 11/17/2013 12:30:00 PM
“No more starting today with ~ what is left over f...
~ မဂ္ဂ ~
◀ Sunday Morning of Tokyo ▶
~ ဘယ်လိုလဲကွယ် ~
~ ကိုယ်တည်းရှုပ်မိ အပြစ်ရှိ၏ ~
~~ သမီးရေ ~~
-- Be empty of worrying --
~ Still missing you, BIRD ~
◀ အဟက်..!! ▶